Nabata na ZIBO YUNFENG INDUSTRIAL CERAMICS CO., LTD
Nkwado email zbyunfeng@yunfeng.cn
Nkwado oku +86 0533 5556936
Mpempe akwụkwọ centrifugal
Onye na -ehicha ihe dị ala
Onye njupụta njupụta etiti
Akwa nhicha nhicha
Alumina seramiiki efere-mosaic-brick-tile
Ihe na-akpọnwụ akpọnwụ- igbe mmịpụta
Yiri ihe mkpuchi seramiiki na -eguzogide
Alumina seramiiki maka ịhazi ya
Ngwa seramiiki alumina nwere nnukwu ahịa
N'ime ụlọ ọrụ kemịkalụ ọgbara ọhụrụ, nchara na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, na -ejikarị igwe na akụrụngwa dị iche iche Ngwa ndị a na -arụ ọrụ dị oke mkpa, ike mmadụ adịghịkwa ka nke anyị. Ọ bụrụ na igwe ahụ bụ ezigbo igwe, ...
Okwu mmalite na itinye nrapado seramiiki na-eguzogide
site na nchịkwa na 21-09-17
A na-akpọkwa ihe nrapado seramiiki na-eyi nke na-eguzogide, nke na-eguzogide seramiiki seramiiki. Ọ na-ezo aka n'ụdị nrapado arụmọrụ dị elu nke ejiri mee nke ọma ịrapara mpempe akwụkwọ seramiiki na-eguzogide ma ọ bụ bọọdụ lining n'elu akụrụngwa akụrụngwa maka eyi -...
Otutu ọrụ, ọtụtụ ụdị, seramiiki alumina nwere ọtụtụ uru
site na nchịkwa na 21-04-19
A na -ekewa ceramik alumina dị ka ọdịnaya nke Al2O3 si dị na porcelain 99, poselin 95, porcelain 92 na ụdị ndị ọzọ, mgbe ụfọdụ ọdịnaya Al2O3 na 80% ma ọ bụ 75% na -ekewakwa dị ka usoro seramiiki alumina nkịtị. N'ime ha, ihe eji esi nri 99 nke aluminom maka imepụta temp dị elu ...
Nlekọta akwụkwọ nhicha oge niile/ntuziaka nhicha akwụkwọ
site na nchịkwa na 21-03-31
Ntuziaka na ihe edeturu maka iji: 1. Tupu ịmalite igwe, lelee ma pipeline dị larịị yana ma mbanye mpekere slurry na valvụ nke ọkpọkọ alaka nke onye na -ehicha slag emeghe. 2. Mepee valvụ mwụpụ slag iji mee ka mpụta slag dị larịị. 3. Mepee ngwaọrụ slurping ka f ...
Nhazi seramiiki na -ejikarị ụdị ụzọ anọ
site na nchịkwa na 21-03-23
Enwere ụzọ nhazi seramiiki anọ a na -ahụkarị: egweri, polishing, nhazi ultrasonic na nhazi laser. Ceramic Yunfeng na -esote ka ị webata, usoro nhazi dị iche iche nke seramiiki bụ otu esi ahazi. Mbụ, egweri: bụ ụdị usoro iji nweta ịdị gịrịgịrị ngwa ngwa, u ...
Kedu ihe bụ njiri mara nke alumina seramiiki?
site na nchịkwa na 21-03-17
Alumina seramiiki tube bụ ụdị alumina (Al2O3) dị ka ihe seramiiki bụ isi, enwere ike iji ya na mbara igwe, ngwa agha. Ọ bụ seramiiki a na -ejikarị eme ihe, ugbu a maka onye ọ bụla iwebata uru nke seramiiki seramiiki zuru ezu. 1. Ezi nkwụsi ike nke alumina ceramic tube: alumina seramiiki tube s ...
Teknụzụ ịkpụzi akacha eji maka seramiiki alumina
site na nchịkwa na 21-03-15
Enwere ọtụtụ ụzọ esi akpụ ceramik alumina, dị ka extrusion, injection, ịpị nkụ, ịpị ọkụ na ụzọ ndị ọzọ na -akpụ. Na -adịbeghị anya, ọtụtụ ọhụrụ na -akpụ teknụzụ e mepụtara n'ụlọ na mba ọzọ. Enwere ike imepụta ụzọ nhazi dị iche iche dabere n'ụdị dị iche iche na ...
Ihe edeturu maka ịwụnye valvụ ọnụ ụzọ mma pneumatic nke mwepụ slag na -ewepu (mwepụ slag na -aga n'ihu)
site na nchịkwa na 21-03-08
Ntuziaka nwụnye nke valvụ: 1. Ekwesịrị ịwụnye valvụ ahụ dịka ntuziaka nke akụ dị na valvụ ahụ, iji chọpụta ntụzịaka nke nrụnye valvụ, enweghị ike itinye valvụ ahụ n'akụkụ nke ọzọ, isi eriri valvụ ga -abụrịrị. ogologo, ihu njedebe ya na ...
Ihe nrụnye dị ọcha chọrọ nlebara anya/otu esi etinye ihe nhicha slag?
site na nchịkwa na 21-03-06
Kpachara anya maka ịwụnye slag remover Nlekọta maka ịwụnye: 1. Tupu nrụnye, biko jiri nlezianya lelee ma nha nha kwekọrọ na eserese ahụ, wee lelee ma ndepụta mbukota ọ dabara na ngwongwo. 2. Kpọkọtanụ ihe nkwado na tankị na -agbapụta na str ...
Mmezi nke mwepụ slag
Mmezi nke mwepụ slag 1. Na -enyocha mgbe niile ma valvụ bọọlụ na -abata na ọpụpụ na -agbanwe agbanwe. 2. Lelee ihe na -eyi nke alaka slag nke ọ bụla na -apụ apụ mgbe niile. Ọ bụrụ na ọ na -eyi, ekwesịrị idochi ya n'oge. 3. Lelee uru ihe nlele nrụgide oge niile maka ...
Akwụkwọ pulp ọcha akụrụngwa desander akụrụngwa ụkpụrụ
site na nchịkwa na 20-12-10
Emepụtara slagger vortex na 1891, mana ejiri ya mee ihe na ụlọ ọrụ akwụkwọ akụkọ na 1906. N'oge ahụ, a na -eji vortex slagger naanị wepụ ihe na -adịghị ọcha site na slurry fiber. Isi ihe nke mkpochapu slag bụ cylinder ...
2019 na Cairo, Egypt (igwe na -eme akwụkwọ)
site na nchịkwa na 20-09-05
Na anwụ na -acha ọkụ na ngwakọta Arabian dị omimi. Anyị sooro ndị otu ihe ngosi akwụkwọ Bossing mara mma na Cairo. Ịbanye n'Ijipt bụ oriri maka anya, njem nke uri. Enwere pyramid dị omimi, pharao ochie ...
Zichuan ọdịda anyanwụ nke Liu watts Industrial Park, No.1. Zibo, Shandong, China
Ngwa seramiiki alumina nwere nnukwu akara ...
Okwu Mmalite na ngwa nke eyi-resi ...